हामी आफ्नै परीक्षा गर्न मेची–महाकाली अभियान चलाउँदैछौं : ऋषिकेश पोखरेल, नेता तथा सांसद्, नेकपा एमाले
मधेशी मोर्चाले निरंकुशता चाहेको हो ? मधेशी मोर्चा लोकतन्त्र मान्दैन ?
० मेची–महाकाली अभियानको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
— हामीले फागुन २१ गतेदेखि चैत्र ५ गतेसम्म मेची महाकाली अभियान चलाउन लागेका छौं । यो अभियानमा अध्यक्षलगायत सबै नेताहरू सहभागिता जनाउँदैछन् । फागुन २१ गते बिहान १० बजे काकडभिट्टाबाट कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ । २१ गते दुई वटा जनसभा गर्दैछौं । विर्तामोड र दमकमा जनसभा गर्दैछौं । त्यसैगरी २२ गते मोरङ, २३ गते सुनसरी, २४ गते सप्तरी गर्दै यो अभियान अगाडि बढ्छ । कम्तीमा एक हजार गाडी, १० हजार मोटरसाइकल र एक लाख मानिस फागुनको २१ गतेदेखि चैत्रको ५ गते राजमार्गमा उतार्ने हाम्रो तयारी छ ।
० एमालेप्रति मधेशमा भ्रम श्रृजना भयो भनेर यो अभियान गर्न लाग्नुभएको छ । के कस्तो भ्रम चिर्न यो अभियान गर्न लाग्नुभएको हो ?
— होइन । यसमा अलि प्रचार पनि गलत ढंगले गरियो । हामीले अहिले प्राप्त उपलब्धिको रा ागर्न चाहन्छौं । जसमध्ये संविधानमार्फत् प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्ने र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउन चाहन्छौं । प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना नगर्ने हो भने यो पनि गुम्न सक्छ । जनतालाई बलियो बनाउने सबैभन्दा राम्रो विधि निर्वाचन हो । २० वर्षदेखि गाउँस्तरमा जनप्रतिनिधि छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन वटा निर्वाचन अनिवार्य छ भन्ने हाम्रो पहिलो जनदबाब हो । जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ । स्थानीय चुनाव भएपछि मात्र जनता बलिया हुन्छन् । त्यस्तै, तराईमा एमाले छैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । तराईमा एमाले छ कि भन्ने कुराको एमालेले आफूलाई पनि परीषण गर्दैछ । एमाले आफ्नो पनि परीक्षा गर्न चाहन्छ । सामाजिक सद्भाव, एकताको निम्ति र राष्ट्रियतालाई सृदृढ र विकासका निम्ति हामीले यो अभियान गर्न लागेका छौं । यो अभियान कसैको विरूद्धमा होइन । नेकपा एमाले तराईमै जन्मेको पार्टी हो । झापा विद्रोहदेखि सप्तरी–सिरहा हुँदै पश्चिमसम्म नेकपा एमाले पहुँच बढाएको हो । त्यसकारण तराईमा एमालेले आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गर्नका लागि अभियान गर्दैछ ।
० पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अभियानका क्रममा कुनै घटना भए त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो आशंका किन ?
— हामीलाई कुनै आशंका छैन । गृहमन्त्रीले आशंका जन्माइदिनुभयो । गृहमन्त्रीले जनकपुरमा एमालेप्रति लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँ कांग्रेसका नेता मात्र होइनन् । उहाँले एमालेप्रति लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई शंका लागेको हो ।
० भनेपछि आशंकाका बीच एमालेले मेची महाकाली अभियान गर्न लागेको हो ?
— हामी ढुक्क छौं । यो अभियान कसैप्रति लक्षित छैन । हामी राजमार्ग क्षेत्रमा एमालेको उपस्थिति हेर्न चाहन्छौं । जहाँसम्म आशंकाको कुरा छ, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण आशंका उब्जिएको हो । यदि केही भयो भने त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ । हामी राजमार्ग क्षेत्रमा मार्ग–समुद्र बगाउन चाहन्छौं । त्यो राष्ट्रियता, संविधान, विविधताकाबीच एकताको पक्षमा हुनेछ । प्रेम र सद्भावपूर्वक भावनाका साथ हामीले अभियान गर्न लागेका हौं ।
० मधेशमा एमालेमुक्त गाउँ–शहर अभियान पनि चलेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
— साथीहरूले भाषण गरेका होलान् । भाषण गर्नेहरूले त्यही गाउँमा कति एमाले रहेछन् भन्ने कुरा राजमार्गमा उभिएर हेरे हुन्छ । त्यो गाउँमा र तराईमा एमाले कति रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ नि । तराईमा एमाले छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षा एमाले गर्न पाउनुपर्छ । हामीले अरूको परीक्षा गरेको होइन, हामीले हाम्रो परीक्षा गर्न लागेका हौं ।
० यता, मधेशी मोर्चा धनुषाले तपाईंहरूले अभियान स्थगित नगरे प्रतिकार गर्ने र बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू आफ्ना गतिविधि गर्न पाउँछन् । लोकतन्त्रमा एउटालाई मन नपरेको कुरो अर्कालाई भन्न पाइन्छ । मधेशी मोर्चाले जुनसुकै कार्यक्रम गरे पनि एमालेले बिथोल्न आउँदैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू जनताका लागि खुलेका पार्टी हुन् भने लोकतन्त्रलाई निषेध गर्ने विधि अपनाउनुहुन्न नि । राजनीति त योग्यताले गर्ने हो, रिसले होइन । एमालेले यो अभियान चार महिना अगाडि घोषणाा गरेको थियो । मोरङ जान पाउने÷नपाउने कुरा मधेशी मोर्चालाई सोधेर जाने होइन नि । सप्तरी जान पाउने कि नपाउने कुराका लागि मधेशी मोर्चाको अनुमति लिनुपर्ने होइन नि । नेपालका नागरिक देशका कुनै ठाउँमा जान पाउनुपर्छ । अरू कसैको कार्यक्रम बिथोल्नु भनेको गैरराजनीतिक चरित्र होइन र ? मधेशी मोर्चालाई पनि यस्तो अभियान गर्न कसले रोकेको छ । मोर्चाले यस्तो अभियान गरे हामी पानी र खाजा खुवाउन बाटोमा बस्छौं ।
० वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफ्नो जिल्लामा जाँदा त्यतिको तनाव भएको थियो । अब तपाईंहरूले अभियान नै चलाउन लाग्नुभएको छ । परिस्थिति सहज हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
— मधेशी मोर्चाले त्यस्तै गर्नु भएन नि । मधेशी मोर्चाले निरंकुशता चाहेको हो ? मधेशी मोर्चा लोकतन्त्र मान्दैन ? मधेशी मोर्चा जनताको विश्वास गर्दैन ? लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने लोकतन्त्रका नियमलाई स्वीकार गर्नु प¥यो नि ।
० एमालेले त संविधान संशोधन प्रस्ताव पास नै हुन नदिने किन भनेको होला ?
— यो संविधान ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले भन्न पाउनुपर्छ । जनतालाई भन्न दिनका लागि चुनावमा जानुप¥यो नि । जनताले मतपत्रमार्फत् यो कुराको छिनोफानो गर्छन् । जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको कारिन्दा हो । हरेक चार–पाँच वर्षमा जनताले अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ । एक पटक जनप्रतिनिधि बनेपछि सधैँ यो पदमा बसिरहन पाउनुपर्छ भन्नेहरू जनताका दुश्मन हुन् । जनताले कारिन्दा बनाएका हुन्, मालिक बनाएका होइनन् । त्यसकारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरमलगायतले ठिक गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा जनतालाई मतपत्रमार्फत् बोल्न दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनता देवता हुन् । जनताले जे भन्छ, त्यही मानौं न । किन एकअर्कालाई गाली गर्ने ?
० त्यसो भए पहिलो संविधान संशोधन किन गराउनुभयो ?
— त्यो पनि गल्ती भयो । यो संशोधन आवश्यक छैन भनेर त्यसबेला पनि एमालेले बोलेको थियो । यो संविधान ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले भन्न पाउनुपर्छ ।
० मधेशमा त्यतिको आन्दोलन भयो । धेरैले शहादत दिए । त्यो चाहीं के थियो ?
— आन्दोलन भयो । तराईमा ठूलो क्षति भयो । यो कम दुःखको कुरा होइन । एउटा नेपालीको मृत्युलाई कसैले कमजोर ठान्नु हुँदैन । मधेशी मोर्चाले आन्दोलनकारीको मूल्य तोक्यो, त्यसविरूद्ध म सदनमा पनि बोलेको थिएँ । जीवन अमूल्य हुन्छ । जनतालाई बोल्न नदिएर ठेकेदारले मात्र बोलेर राजनीति हुँदैन । म चार वर्षका लागि अनुमोदित भएको छु, मलाई दश वर्ष जागिर खुवाउने ? पटकपटक जनताले अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले निकास आन्दोलनबाट होइन जनादेशबाट आउँछ । त्यसैले सबै चुनावमा जाऔं ।
प्रकाशित मिति : २०७३ साल फागुन २० गते शुक्रबार ।